အလိုအလျောက်ပလပ်စတစ်စာရွက်ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - တရုတ်အလိုအလျောက်ပလပ်စတစ်အခင်းစက်ရုံ
အသစ်အမျိုးအစား CNC လုပ်ကြံလီဆယ်မှုများစာရွက်ဂဟေစက်
အသုံးပြုခြင်းနှင့် Feature ၁။ ဂဟေအမျိုးအစား - အလျားလိုက်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ပိုက်ခြင်း။ PLC touch-panel control system သည်အပူချိန်၊ အချိန်နှင့်ဖိအားကိုပြုပြင်ခြင်းအောက်ရှိပစ္စည်းများ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီအလိုအလျောက်ညှိပေးနိုင်သည်။ ၂.Control စနစ် Siemens PLC၊ ၇ လက်မအရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် - Siemens ။ 3.Brand အသစ်ပေါင်းစပ်ထားသောဘောင်, အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂီယာယန္တရား, အလုပ်တည်ငြိမ်နှင့်သာလွန် i ...
လျှောက်လွှာနှင့် Feature SUD-BO1530 စီးရီးများသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးစွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်ပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ သစ်သား၊ ကြော်ငြာ၊ PVC, PE, PP, PPH, acrylic, aluminium ပလပ်စတစ်ပြားများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသည်။ ၁။ လေးလံသောစက်လေးဘောင်ကို CNC planer-type အမျိုးအစားကြိတ်ခွဲစက်ဖြင့်ပိုမိုအားကောင်း။ တည်ငြိမ်သည်။ 2. တိကျမှန်ကန်သောထိုင်ဝမ် linear လမ်းညွှန်၊ တိကျမှန်ကန်သော helical ဂီယာထိန်သိမ်းခြင်း။ ပိုမိုတည်ငြိမ်မှု, ပိုမိုမြင့်မားတိကျစွာ။ 3.Elarged ထောက်ပံ့မှု frame, ဂီယာတည်ငြိမ်စေရန် ...
အသုံးပြုခြင်းနှင့် Feature ၁။ ထူးကဲကောင်းမွန်သောဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်အညီဖြတ်တောက်နှုန်းကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိနိုင်စွမ်း၊ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းနှင့်လည်ပတ်နိုင်မှု။ ၃။ ထူးခြားသောအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးနှင့်အမှိုက်စွန့်ပစ်မှုစနစ်၊ ဖုန်မှုန့်များကိုသေချာစွာထုတ်ယူနိုင်ခြင်း၊ လွယ်ကူစွာဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့်ရိတ်သိမ်းခြင်းတို့ကိုကောင်းစွာစုဆောင်းရန်၊ 4. ရှေ့နှင့်နောက်အနေအထားအာရုံခံကိရိယာစနစ်များ, အမြန်နှင့်တည်နေရာအတွက်တိကျ; 5.Saw Blade အအေးပေးစနစ်၊ အပိတ်အတားများကိုဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ရပ်တန့်ခြင်းအခြေအနေများ ...
ဂဟေဆော်ခြင်းအမျိုးအစားနှင့်အလျားလိုက်ဂဟေနှင့်လှိမ့်ပိုက်။ PLC touch-panel control system သည်အပူချိန်၊ အချိန်နှင့်ဖိအားကိုပြုပြင်ခြင်းအောက်ရှိပစ္စည်းများ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီအလိုအလျောက်ညှိပေးနိုင်သည်။ HDPE, PP, PVC, PVDF, PPN, PPH ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဂဟေနှင့်လှိမ့်သောအပူရှိန်ပြားပြားများအတွက်သင့်လျော်သည်…… ၇ လက်မအရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် - Siemens Siemens PLC ။ အသစ်စက်စက်ပေါင်းစပ်ထားသောဘောင်၊ အလွန်စိတ်ချရသောဂီယာယန္တရား၊
အသုံးပြုခြင်းနှင့်လက္ခဏာများဂဟေဆော်ခြင်းအမျိုးအစား - 0-145 °မှပလတ်စတစ်ပြားများကိုကွေးခြင်း။ PLC touch-panel control system သည်အပူချိန်၊ အချိန်နှင့်ဖိအားကိုပြုပြင်ခြင်းအောက်ရှိပစ္စည်းများ၏သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီအလိုအလျောက်ညှိပေးနိုင်သည်။ HDPE, PP, PVC, PVDF, PPN, PPH ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောဂဟေနှင့်လှိမ့်သောအပူရှိန်ပြားပြားများအတွက်သင့်လျော်သည်…… ၇ လက်မအရောင်ထိတွေ့မျက်နှာပြင် - Siemens Siemens PLC ။ အသစ်စက်စက်ပေါင်းစပ်ထားသောဘောင်၊ အလွန်စိတ်ချရသောဂီယာယန္တရား၊